Talyaaniga: Tuulo la waayay oo kasoo dhex baxday haro biyo ah – ASM Raage
Talyaaniga: Tuulo la waayay oo kasoo dhex baxday haro biyo ah
Posted byabdullahi87 May 19, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Qoraalka sawirka,Harada Resia oo u muuqata sida caadiga ah
Howlo dayactir ah oo ka socday meel loo dalxiis tago oo ku taalla dalka Talyaaniga ayaa laga helay haraadiga tuulo biyaha hoostooda ku luntay tobannaan sano ka hor.
Harada Resia, oo ku taalla dhinaca waqooyi ee dalkaas, ayaa caan ku ah minaaradda kaniisadda ee kasoo dhex muuqata biyaheeda barafka ah.
Goobtan taariikhiga ah ayaa xitaa dhiirrigalin u noqotay in buug laga qoro iyo in shirkadda Netflix ay ka sameyso filim musalsal ah.
Laakiin xilli ay hadda harada si ku meel gaar ah u qallalan tahay, dadka deegaanka ayaa fursad u helay in ay arkaan raadadkii ugu dambeeyay ee tuulada Curon.XAYEYSIINhttps://7af2dd8e77ddab69af62d38b020a041a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Tuuladaas bari waxaa ku noolaan jiray boqollaal qof oo ay hooy u ahayd. Laakiin waxay ku quustay fatahaad dhacday sanadkii 1950-kii, waxayna gabi ahaanba isu baddashay meel ay biyaha ka korreeyaan.
Harada Resia – ama Reschensee oo looga yaqaanno Jarmalka – waxay ku taallaa gobolka South Tyrol ee dalka Talyaaniga, kaasoo xuduud la wadaaga dalalka Austria iyo Switzerland.
Gabar Talyaani ah oo Soomaaliya lagu haystay oo dalkeedii lagu celiyay
Sawirro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya raadadkii dadka, qolal la dagganaa iyo darbiyo, kuwaasoo dhammaantood salka u fadhiyay Harada.
Minaaradda kaniisadda ee harada lagu yaqaanno ayaa waxay dhisneyd tan iyo qarnigii 14-aad.
Luisa Azzolini, oo ka mid ah dadka kasoo jeeda gobolkaas, ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo qoray in ay “dareen xanuun badan kala kulmeen” ku dul socoshada burburka tuuladaas horay loo dagganaa.
Tuulada Curon waxay ku luntay daadad soo rogmaday 1950-kii, markaasoo dowladdu ay go’aansatay in ay dhisto biyo xireen kaddibna isku darto labo haro oo ku dhawaa – inkastoo dadka shacabka ay ay aad uga soo horjeedeen tallaabadaas.
In ka badan 160 guri ayay biyuhu qariyeen, shacabkii tuulada Curon ayaana sidaas ku barakacay – walow qaarkood ay go’aansadeen inay degaan tuulo cusub oo laga abuuray agagaarkaas.
Hadda, haradan waxay caan ku talay dalxiiska dadka buuraha fuula. Dadka soo booqda xilliga xagaaga ayay u suurtagashaa inay ku dul socdaan barafkeeda si ay u gaaraan ilaa minaaradda kaniisadda qadiimiga ah.
Qiso jacayl oo cajiib ah
Wasiir Carbeed oo xilkiisa ku waayay Wareysi caro badan abuuray uu bixiyay !!